In this Thursday Sept, 19, 2019 file photo, Zimbabwean medical staff march on the streets of Harare. A billionaire has offered to pay striking doctors in Zimbabwe to help end a months-long protest over grave hospital conditions as the economy crumbles, and a doctors' group on Thursday Jan. 23, 2020, said it was encouraging members to embrace the money and return to work. But Dr. Masimba Ndoro, vice president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, warned that “nothing much has changed” in the conditions at public hospitals that include the lack of basic items such as bandages and gloves. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
HARARE, ZIMBABWE (AP) — A billionaire has offered to pay striking doctors in Zimbabwe to help end a months-long protest over grave hospital conditions as the economy crumbles, and a doctors’ group on Thursday said it was encouraging members to embrace the money and return to work.
Relatives of patients are still expected to buy such items and, in some instances, bring buckets of water as Zimbabwe’s once-envied health care system reflects the southern African nation’s general collapse.
Doctors abandoned work four months ago to press for better salaries and working conditions, saying their roughly $100 monthly pay is not enough to get by. The action became one of Zimbabwe’s longest doctors’ strikes in history.
Critics say the collapse of Zimbabwe’s economy is making hollow President Emmerson Mnangagwa’s promises to change the country’s fortunes when he took power in 2017 after longtime leader Robert Mugabe stepped down under pressure.
Africa Health Newsroom Zimbabwe